अफिसर्स क्लवको वार्षिक साधारण सभा भ्यूटावरमा : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
कमल पौडेल, बागलुङ पौष २८ ।
अफिसर्स क्लव बागलुङको ३८ औं वार्षिक साधारण सभा काठेखोला गाउँपालिकाको घोडावाँधे, भ्यूटावरमा सम्पन्न भएको छ। सभाले क्लवका रिक्त पदहरु पूर्ति गरेको छ।
जसअनुसार क्लवको उपाध्यक्षमा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय का प्रमुख सचिन्द्र कुमार देव, कोषाध्यक्षमा आन्तरीक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठ, लगाएत सदस्यहरुमा अर्जुनवाण गण घोडावाँधेका सेनानी राज कुमार महत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत केशव लामिछाने, प्रहरी निरिक्षक पर्सुराम मल्ल, धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका डाक्टर पर्निता राजभण्डारी थपिनुभएको छ। यसरी ६ जना थपिए संगै क्लवको ११ सदस्यिय कार्यसमिति पूर्ण भएको छ।
क्लवको प्रमुख संरक्षक उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायधिश शेषराज शिवाकोटि, संरक्षकमा न्यायधिस हरि प्रसाद पौडेल, र न्यायधिस शकुन्तला घिमिरे, विशेष संरक्षकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेल रहनुभएको छ।
त्यस्तै सल्लाहकारमा जिल्ला न्यायधिस प्रकाश प्रसाद पण्डीत, अर्जुनवाण गण घोडावाँधेका प्रमुख सेनानी भुवनराज देवकोटा, धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. सागरकुमार राजभण्डारी, उच्च अदालतका रजिष्टार कृष्ण प्रसाद पौडेल रहनुभएको छ।
नवगठित कार्यसमितिलाई शुभकामना दिँदै उच्च अदालत बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायधिस शेषराज शिवाकोटिले अफिसर्स क्लवले न्यायक्षेत्रका व्याक्तिहरुलाई समेत समेटेकोमा खुसि व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेलले क्लव कर्मचारीको कार्यालय समय वाहेको समयमा सिकाइ संगठनको रुपमा विकास भएको, भन्दै दोश्रो घरको उपमा दिनुभएको छ। वनभोज सहित आयोजना गरिएको साधारण सभामा विभिन्न भूमिकामा रहने सवैलाई धन्यवाद दिँदै प्रजिअ खरेलले उत्तर गंगा विशेषांकले बागलुङको पूरानो कार्यालय संरचनाको चिनारी दिएको दावी गर्नुभएको छ।
९० जना अफिसर्स क्लवका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको सो वनभोज सहितको साधारण सभाले सचिव सरितादेवि शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रगति तथा ६३ हजार वरावरको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
सोहि अवसरमा आयोजित घैंटोफोड प्रतियोगितामा न्यायधिस हरि प्रसाद पौडेल विजयी हुनुभएको छ। कार्यक्रममा उत्कृष्ठ प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने डेन्टल सर्जन डा. सञ्जु पौडेल र ल्याव अधिकृत सुरज वराललाई कदर समेत गरिएको थियो।
सो साधारण सभा क्लवका अध्यक्ष दिपक प्रसाद तिवारीको अध्यक्षता, तथा सचिव सरितादेवि शर्माको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो।